musha Africa Atiku Abubakar Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
Yedu Biography yeAtiku Abubakar inoratidzira Chokwadi pamusoro peChidiki Nyaya Yake, Hupenyu Hwekutanga, Mhuri, Vabereki, Mudzimai, Vana, Mararamiro, Net Kukosha uye Hupenyu hwePamoyo.
Muchidimbu, isu tinokuudza iwe nhoroondo yemunhu wezvematongerwo enyika wekuNigeria anotanga kubva pamazuva ake ekutanga, kusvika paakatanga kuve nemukurumbira.
Hongu, munhu wese anoziva kuti aimbova mutevedzeri wemutungamiri weNigeria. Zvekare chokwadi chekuti iye yakaramba kukunda kwaMuhammadu Buhari musarudzo dzaNigeria dza2019. Zvisinei, vashoma chete ndivo vanofunga Atiku Abubakar's Bio iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Atiku Abubakar Utano Nyaya:
Atiku Abubakar akazvarwa musi we 25th waNovember 1946 kuJada, Adamawa state, Nigeria. Akaberekwa kuna amai vake Aisha Kande (akafananidzirwa naye pasi apa) uye kuna baba vake Garba Abubakar (mutengesi anofambisa uye murimisi wezvokudya).
Kukura muKokoli, musha muduku weJada hurumende yeAdamawa State iyo inonyatsozivikanwa nokuda kwekukosha kwechirimwa, vechidiki Atiku vakawana zvikomborero zvekuva mwana mumwe chete wevabereki vake, chinhu icho icho bhizinesi rakaratidzwa pachitaura rwendo rwake rwoupenyu ;
“Ndini ndega mwana akaberekwa nevabereki vangu. Makore mushure mekuzvarwa kwangu vabereki vangu vakaedza kunditsvagira munin'ina kana mukoma asi havana kubudirira pazviri ”
Atiku aidiwa zvikuru nevabereki vake avo vasina kungomuona iye semwana ane ramangwana rakanaka asi akatamba kuenda kune zvaaida. Moreso, Garba Abubakar (baba vaAtiku) uyo aizivikanwa nekuraira vana vadiki mumusha weKokoli nedzidziso dzeIslam, akashanda nesimba kuti ave nechokwadi chekuti mwanakomana wake aivewo nekurerwa kwakanaka kwechiIslam.
Hunhu hwaGarba hwekushingairira kuraira vana nedzidziso dzeIslam hwakasimudzirwa nekufungidzira kusiri iko kwekudzidziswa kwekumadokero semuparadzi wetsika nemabatiro etsika. Nekuda kweizvozvo, kuyedza kwevakuru vemunharaunda vakaita basa rekumanikidzwa rekuverenga nekunyora kwakagamuchirwa nekuomarara kwakasimba kubva kuna baba vaAtiku. Nekudaro, Garba akavharirwa kwemazuva uye akasunungurwa mushure mekusangana nemari yemubhadharo wekuyedza kudzikisira dzidzo yemwana.
Atiku Abubakar's Education:
Atiku akatanga chikamu chekumadokero kuchikoro cheJada Primary mugore ra 1954 paakanga akwegura 8. Mushure mekunge makore matanhatu edzidziso yepamusoro kana yekutanga, akawana ruzivo rwakakwana rwakamuita kuti apinde muAdamawa kuchikoro chesekondari yeYola (guta guru reAdamawa) uko akatanga chirongwa chemakore mashanu kuchikoro chepamusoro mu1960.
Panguva dzezororo aishanda semusikana wechidiki ari munyori wehofisi yehurumende yehurumende yake yega. Basa racho rakauya nemari yakawanda yakabatsira Atiku kugadzirisa zvaidiwa zvake uyewo kutenga imba amai vake vakanga vari kutyisidzirwa kubudiswa panguva iyoyo.
Tumira kuyedza chikoro chesekondari akaona Atiku aine nguva dzezvidzidzo kuNigeria Police College Kaduna pamwe neChikoro cheHygiene muKano kwaakatora chinzvimbo chake chekutanga chehutungamiriri seMudzidzi weUnited Student. Hazvina kutora nguva refu asati awana kunyoresa kuti adzidze mutemo kuAhmadu Bello University Zaria kwaakapedza muna June 1969.
Atiku Abubakar Biography Chokwadi - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
Paakapedza kudzidza, Atiku yakapiwa kusarudzwa muDhipatimendi reTare and Excise yava kuzivikanwa seNigerian Customs Service. Kusunungurwa kwake kwemabasa kwakamuona achikwira pamisara kuti ave mutevedzeri mukuru we Customs.
VERENGA Bobrisky Nyaya Yehucheche Nyaya pamwe neS Untold Biography Chokwadi
Iyo nguva yakaratidzirawo foray yake mubhizinesi sezvaaiita muzvivakwa zvezvivakwa. Rwakakomborera zvakanyanya raive bhizinesi diki reMafuta uye gasi raakatanga nemumwe wekuItaly, Gabriel Volpi muma1980. Bhizinesi rakanyoreswa seNigeria Container services (NICOTES) uye raishanda muhofisi yemidziyo mumazuva ayo ekutanga pazviteshi zveApapa, muLagos.
Bhizimisi ikozvino rinozivikanwa se Integrated and Logistics Services (INTELS) yakatumirwa kuhofisi yakanaka muPort Harcourt sezvo yakanyora kubudirira. Kufambira mberi zvakasimba kusvika musi we INTELS ibhizimisi reMadhora emamiriyoni ane zviuru zvevashandi varo vachishanda nekunze kune dzimwe nyika dzeAfrica.
Atiku Abubakar Biography Chokwadi - Kumuka Mukurumbira:
Kukwira kwaAtiku mukurumbira kunogona kuve kwakakonzereswa nekukwikwidza kwake mune zvematongerwo enyika izvo zvakasimbiswa nehukama hwake hwepedyo nevatungamiriri vezvematongerwo enyika. Aive achishingairira mukubvumidzwa kwezvematongerwo enyika panguva iyo tarisiro yaive yakakwira zvine chekuita neshanduko yakabudirira kubva paudzvanyiriri kuenda mukutonga kweVanhu. Kuzvipira kwake mukudzoreredza hutongi hwevagari hwakabatwa nekukwikwidza kwemauto nehumambo hwehudzvanyiriri hwakakonzera kumupa kurumbidzwa uye kuvimba kwevamwe vake.
Nekuda kweizvozvo, Atiku akabata kadhi rebato rake nechinzvimbo chemagavhuna mudunhu rake iro raakakunda zvine mutsindo asi rakabviswa nehutongi hwehudzvanyiriri hweyeMauto Mukuru weHurumende General Ibrahim Babangida.
Vachitaura nezvematongerwe ezvematongerwe enyika vakaona Atiku akakundikana kuva mutevedzeri wemutungamiri wehurumende, Va Moshood Abiola, vakatizira kuLondon kuti vatize kutambudzwa kwekutonga uye vakasvika pamwe vakabatana nyika kuti vabatane naJackie Farris, mutungamiri wezvematongerwo enyika ainzwira tsitsi mutungamiri wekuchinja muNigeria.
Mwedzi yakati gare gare, kufa kweiye aive mukuru wemauto ehurumende Sani Abacha akagadzirisa nzira yekuchinja kwakatsetseka kuenda kuhurumende yekutonga. Atiku akatsigira kukwikwidza kwemutungamiri wenyika, Olusegun Obasanjo uyo akamutora semumwe wake. Iyo duo chishuwo chakasangana nekufarira kwakavaona vachikunda sarudzo yaFebruary 27th 1999. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo
Atiku Abubakar Wife uye Vana:
Pfungwa dzese dzakanangana nekunzwisisa chiyero chakaringana cherudo runoshanda kuvakadzi vazhinji, pane mhinduro mune yehukama mararamiro eAtiku. Kusiyana Yemi Osibanjo, anoita Barika.
Iye wezvematongerwo enyika ane ruzivo parizvino akaroora vakadzi vana vasingareve aimbova mukadzi waakarambana naye asati aroora mukadzi wake wechina.
Tinokuunzira mashoko echokwadi nezve akasangana ndokuroora vakadzi vake ayo Titilayo Albert ari wekutanga pakati pevakaenzana. Atiku naTiti (inoratidzwa pazasi) dzaive shiri dzerudo dzine hukama husina kudzika zvakanaka mhuri yekupedzisira. Nekudaro, ivo vaviri vakaroora muchivande muna Zvita 1971 muLagos.
Makore masere gare gare (1979) Atiku akasungira ruzivo naLadi Yakubu avo vashoma vanozivikanwa pamusoro pezvimwe kunze kwekuti Atiku akapedza imba yavo kuti vawane nzvimbo yemudzimai wake wechina anonzi Jennifer.
VERENGA Kim Jong Un Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Kutaura pamusoro pezvikonzero zvekusarudza kwake kutora mamwe madzimai Atiku akazarura izvozvo;
“Yaive shuviro yangu kuva nemhuri yakakura nekuti ndaive nehudiki hwakasurukirwa ndisina mukoma wekutaurirana naye. Ini handidi zvakadaro kune chero wevana vangu saka chishuwo changu chekuroora mamwe madzimai asinga zadzise zvakataurwa asi kundichengeta ndiri munzira dzose ”
Imba yake yakamuona achibatana nemudzimai wake wechitatu Princess Princessiiatu uyo ​​akaita kuti vana vanomwe vawedzerwe kumhuri kana vachienzaniswa nevatanhatu vakaberekerwa nemudzimai wake wechina Fatima Shettima uyo akaroora ku1986. Wokupedzisira wemadzimai ake ndiJennifer Jemila, mutori wenhau weterevhizheni uyo akasunga chigamba nemakore mushure mekudzoka zvakare kuonana naye muUnited States.
Imba yake inokomborerwa pamwe chete nevana 26, 4 nemudzimai wake wokutanga Amina Titi, pamwe ne6 nemumwe wake wechipiri uye akarambana nemudzimai wekare, Ladi Yakubu. Saizvozvowo, 7 akaberekerwa nemudzimai wake wechitatu Princess Yakubu, 6 nemukadzi wake wechina Fatima Shetimma uye Jennifer uyo akava mukadzikadzi wechina defacto pashure pokurambana kwaLadi Yakubu, akaita kuwedzera kwevana vatatu.
Atiku Abubakar Hupenyu Hwemhuri:
Atiku Abubakar ndiye mwana wega wevabereki vake. Tinokuudzai nezvevabereki vake.
Pamusoro pababa vake; Baba vaAtiku, Garba Atiku aive mutengesi anofamba uye wekurima wekurima. Akange akadzidza muIslam Literacy uye akasema dzidzo yekumadokero, budiriro iyo yakamupinza mudambudziko rekuyedza kubvisa mwanakomana wake wedzidzo yaimanikidzwa yekumadokero.
Akanyura (muna December 1957) achiedza kuyambuka Rwizi rwaMayo Choncha, muviri wemvura kunze kweToungo muzuva redu Adamawa. Mafuro ake akawana zvakare mushure mokunge apindirana maererano nemitambo yeIslam
Achirondedzera chiitiko chinosuruvarisa makore akazotevera Atiku akapa ruzivo muhupenyu hwababa vake;
“Aive munhu akareruka, anoshanda nesimba, ane moyo wakanaka, akavimbika uye aitya Mwari. Ndinomusuwa zvakanyanya uye ndinoshuvira dai akararama kwenguva yakakwana kuti aone zvakanakira dzidzo yekuMadokero muhupenyu hwangu. Zvisineyi, ndakavaka chikoro chepuraimari cheIslam panzvimbo yake yekuviga makore akazotevera kuti ndimuuraye ”.
Nezvaamai vake; Amai vaAtiku, Aisha Kande akararama murume wake wekupedzisira kuti asimudze ega Atiku ndokumuona achinyora huwandu hwebudiriro yebasa muNigerian Customs Services.
Akafira muC1984 nekuda kwekurwadziwa kwepfungwa. Kusvikira iye afa, Aisha Kande aiva amai vanosimbisa avo vaidada nemwanakomana wavo ane hanya.
Atiku Abubakar's William Jefferson Kurangana:
Nharo yakakonzera Atiku Abubakar kwemakore uye yakashandiswa kumirisana naye nevapanduki vezvematongerwo enyika Ndiyo William Jefferson kurangana.
Rangano rakatarisana ne2005 rakazonyatsojeka mushure mokunge FBI yakabudisa vhidhiyo ye congressman uye iyo iyo yakamiririrwa kuLouisana, William Jefferson ichiwana $ 100,000 inokosha ye $ 100 zvigadzirwa muhombodo yeganda.
Videotape iyo yakanyorwa kuburikidza newaya yaipfekwa nemuzvinabhizimusi Lori Mody yakatora Jefferson achiti achazoda kupa Mutevedzeri weMutungamiriri weNigerian (panguva iyoyo) Atiku Abubakar $ 500,000 "sechinhu chinokurudzira" kuve nechokwadi chekuti makambani avo anowana zvibvumirano zvekufona muNigeria. .
VERENGA Ahmed Lawan Kuburitswa Nhau Plus Untold Biography Facts
Kunyange zvazvo William Jefferson kutongwa muUnited States akapera muC2009 asingatauri kana kubatanidza Atiku kuti aite zvinhu zvinonyangadza, uyo aimbova Mutevedzeri weMutungamiri achiri kushanyira United States, kukurudzira kunosimudzira kufungidzira sokuti wakarambidzwa kupinda muhurumende. Kutaura pamusoro pemafungiro Atiku akajekesa kuti:
"Ndakakumbira asi handina kupiwa visa. Zvisinei, havana kuregerera kwandiri. Vangotaura chete kuti shanduro yangu iri kuburikidza nehutungamiri hurongwa. Ndiyo maitiro ega eAmerica kuti aone kuti ndiani wavanoda munyika yavo kana kwete. Handiitiza America, "
Kunyanya zvakadaro Dhipatimendi reUnited States reJustice rine mu2016 rakaramba kuvapo kwechero mhosva yakamirira inopesana naAtiku Abubakar muUS. Izvo, zvakadaro, zvakakundikana kutaura pamusoro peAtiku yakamirira kupihwa vhiza sezvazvinotaura kuti;
"Nyaya dzeVisa dzakavanzika pasi pechikamu 222 (f) cheImmigration uye Nationality Act"
Atiku Abubakar Bhizinesi:
Atiku Abubakar aiva mu2014 akazviti ndiye mubasa mukuru wevashandi vebasa muNigeria. Izvo zvirevo zvaive mune tweets zvakagadzirwa neichimbova vamiriri vemutungamiriri wehurumende zvinoratidzika kuva nemvura sezvo pasina gakava rinooneka rakagadziriswa naro. Zvinotaurwa zviri pasi apa.
Somunhu, ndinotenda zvinyorwa zvangu pakushandisa vaduku veNigeria hazvina kufanirwa nemumwe mubhadhari wega wega muNigeria #LetsTalkJobs
- Atiku Abubakar (@atiku) March 19, 2014
Kubva pakati pe-80s, kushandiswa kwandaiita pachedu kwakaunza zviuru zvemabasa kuNigeria - iye zvino akamira + 50,000 mabasa #LetsTalkJobs
Atiku Abubakar Mipiro KuDzidzo:
Atiku ndomumwe anoshuvira kupa mipiro kudzidzo tichifunga mabhenefiti aakatora kubva pairi. Iyi yaive pfungwa yaive kumashure kwekugadzwa kweABTI - ZARHAM yakadzikira dhizimusi kambani. Zita rekambani rakaburitswa kubva kumavambo evana vaAtiku nemukadzi wake akarambana-wechipiri mukadzi Ladi Yakubu anova iye mubatanidzwa weyakagadzwa.
ABTI ZARHAM ine zvikamu zvehurumende muBTTI Nursery uye Primary School yakagadzirwa muYola mu1992, ABTI Academy, chikoro chesekondari neyemakamuri ezvidziro zvakatevedzwa shure kwechikoro chehurumende yeBritish, pamwe neAbtI-American University (zvino American University of Nigeria, Yola). Yunivhesiti inopa dzidzo yeyunivhesiti yekuAmerica kuvadzidzi.
Atiku Abubakar Chokwadi:
Atiku ane kusvikira zuva rakapinda mumakomisheni mana emutungamiri muNigeria ayo asina kuwana apfuura mapato epamberi. Makore anosanganisira; 4, 1992-2006, 2007 uye 2011.
Ane nguva yakareba yekukwikwidzana nemukuru wake wenguva imwechete. Akange ari mutungamiri wenyika Olusegun Obasanjo uyo waaishanda pasi pemutevedzeri wemutungamiri wenyika makore 8.
Anofungidzirwa nevezhinji kuti ave mumwe wevaNigeria vashoma vanoita zvematongerwe enyika kubva kuchamhembe kwenyika iyo nekuda kwehukama hwemuchato hunoparadzanisa madzinza nemachechi.
CHOKWADI CHINOGONA: Kutenda nekuverenga iyo Biography yaAtiku, mutungamiri anopikisa ku Mohammadu Buhari musarudzo dzemuna 2019 dzekuNigeria.
At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!